Patrick name ကို:
အကောင်းဆုံးမျိုးရိုးအမည်, နာမတျောနှငျ့လူကြိုက်အများဆုံးနောက်ဆုံးအမည်များ Patrick ။
တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနာမကိုအမှီ Patrick အကြောင်းပိုမို
Patrick ဘာကိုဆိုလိုသလဲ နာမတျော၏အဓိပ္ပာယ်ကို Patrick ။
နာမကိုအမှီ Patrick ဘယ်အရပ်ကလာကြသနည်း ပထမအမည်ကို Patrick ၏မူလအစ။
အခြားဘာသာစကားများ, စာလုံးပေါင်းနှင့်အသံထွက်မျိုးကွဲ, ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အမျိုးသမီးနှင့်အထီးမျိုးကွဲ Patrick ၌ဤပထမဦးဆုံးနာမည်။
Patrick ပတျသကျ. အလှနျသေးနုအမည်များ။ ပထမဦးဆုံးနာမအဘို့အမည်ဝှက် Patrick ။
Learn ဘယ်လိုပထမအမည်ကို Patrick အခြားတိုင်းပြည်တွင်အခြားသောဘာသာစကားအားဖြင့်ပထမအမည်ကိုမှကိုက်ညီ။
သင်ဘယ်လို Patrick စီရင်သလဲ? Patrick စီရင်ဖို့ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေ။ Patrick ၏အသံထွက်
Patrick Compatibility ကိုစမ်းသပ်။